कोरोना नियन्त्रणमा ‘स्पुटनिक भी’ « Dainiki
२१ बैशाख २०७८, मंगलवार १०:११
कोरोना नियन्त्रणमा ‘स्पुटनिक भी’
नेपालमा पछिल्ला दिनहरुमा कोरोना संक्रमण दर अत्यधिक हुँदा र यो नियन्त्रण भन्दा बाहिर जानै लाग्दा सरकारले महामारी रोकथामका निम्ति राजधानी लगायत देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा अस्पताल बेडहरु थप्न तदारुकता देखाएको छ । यसै क्रममा काठमाडौंमा एक हज्जार बेड थपिएको खबर आएको छ । यसले कोरोना संक्रमित विरामीको उपचारमा हाल भैरहेको संकटलाइ थोरै भएपनि समाधान गर्न र माहामारी रोकथाम गर्न सहयोग पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ । साथै सरकारले रसियन खोप स्पुटनिक भी नेपाल ल्याउने तैयारी गरेको पनि जानकारिमा आएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यस बारेमा रसियन राजदूत एलेक्सेइ नोभोकोभसंग बार्ता गर्नुभएको र राजदूत नोभोकोभले खोप उपलव्ध गराउने बारे सकारात्मक जवाफ दिनुभएको छ । यो संगै स्वास्थ मन्त्रालय सो खोप ल्याउने तैयारीमा जुटेको छ । समाचारमा जनाइए अनुसार रुसले आगामी डिसेम्बरसम्ममा ८० लाख डोज स्पुटनिक भी दिनेछ भने केही डोज तत्काल उपलव्ध गराउने उल्लेख छ ।
के हो स्पुटनिक भी ?
स्पुटनिक को अर्थ हो यात्रा अभियान । यो रसियाले अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेको पहिलो स्याटेलाइटको नाम हो । इबोला विरुद्धको भ्यक्सिन बनाउन संलग्न संस्था, रसियाको गामालेय नेशनल इन्स्टिच्युट अफ इपिडेमीयोलोजी एण्ड माइक्रोबायलोजीले उत्पादन गरेको कोरोना भ्याक्सिनलाइ यो नाम दिइएको हो । खोप लन्च गर्दै गर्दा मेडियासंग रसियाका राष्टपति पुटिनले भनेका थिए यो विश्वको पहिलो कोरोना खोप हो । यो सर्बोत्कृष्ट खोप हो ।
खासमा यो भाइरल भेक्टर खोप हो जुन एस्टोजेनेका र जोन्सन एण्ड जोन्सनले बिकास गरेका खोपसंग मिल्दोजुल्दो छ । यसलाइ भण्डारण गर्न, व्यावस्थापन गर्न सजिलो छ । भेक्टर खोपमा साधारण हानीरहीत निष्कृय भाइरस प्रयोग गरिएका छन् । जब खोप लगाइन्छ तत् पश्चात शरिरले बाहिरबाट प्रवेश गर्ने हानिकारक भाइरस विरुद्ध एन्टीबडी र टि सेल उत्पादन गर्दछ जुन शरीरको प्रतिरोध क्षमता बृद्धि गर्नको निम्ति महत्वपूर्ण हुन्छन् ।
स्पुटनिकको सवालमा केही अस्वभाविक चाहिँ के छ भने यो दुइ भिन्न प्रकारका भाइरस उपयोग गरेर बनाइएको छ जसलाइ पहिलो र दोश्रो डोज गरि लगाइन्छ । यसमा पहिलो डोजबाट हुन सक्ने संभावित नकारात्मक असरलाइ दोश्रो डोजले सन्तुलन गर्ने र अपेक्षित प्रतिरोध क्षमता बढाउँने दावी गरिएको छ ।
कति प्रभावकारी छ स्पुटनिक भी ?
सैदान्तिक हिसावले दुइ भिन्न भेक्टरको प्रयोग संभव छ र यसो गर्नुको मक्सद उच्च प्रभावकारीता नै हो । अन्य भ्याक्सिन जस्तै एस्टाजेनिका, ( ७६ %), जे एण्ड जे (८५.४ % ) ले एउटा मात्र भेक्टर प्रयोग गरेका छन् त्यसैले तिनको प्रभावकारिता तुलनात्मक रुपमा कम देखिएका छन् जब कि फाइजर ( ९५% ) र मोडर्नाको (९४.१ % ) छ । यति हुँदाहुँदै पनि स्वतन्त्र रुपमा स्पुटनिकको प्रभावकारिता यत्ति नै छ भनेर भन्न गाह्रो छ । हुनत गत अगष्ट महिनामै रसियाको स्वास्थ विभागले यसलाइ रष्टिय प्रयोगशालामा परिक्षण गरि नागरिकमा लगाउने स्विकृति दिइसकेको थियो । तर फास्ट ट्याकबाट परिक्षण गरेर स्विकृति दिएको खोप हाल आठ महिना भैसक्दा सम्म पनि सो खोप बारेका विश्वसनीय तथ्यांकहरु बाहिर उपलव्ध गराइएको छैन । जसका कारण हाल सम्म कुनै पनि स्वतन्त्र औषधि परिक्षण निकायले उक्त भ्याक्सिनका प्राथमिक तथ्यांक हेर्न, अध्ययन गर्न पाएका छ्रैनन् ।
गत सेप्टेम्बरमा बृटिश मेडिकल जर्नल द ल्यानसेटले स्पुटनिक भी को पहिलो र दोश्रो चरणका परिक्षणका नतिजा प्रकाशित गरेको थियो । दुवै चरणका परिक्षणमा ३८ । ३८ जना सहभागी गराइएको थियो र जसको नतिजा उच्च प्रभावकारि रहेको र कुनै गम्भीर नकारात्मक असर नभेटिएको उल्लेख गरियो । पुनः २ फेब्रुअरीमा रसियन बैज्ञानिकहरुले तेश्रो चरणको परिक्षण नतिजा सोही मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित गरे । उनीहरुका अनुसार सो परिक्षणमा १८००० मानिस सहभागी गराइएको थियो जसलाइ तीन हप्ताका फरकमा दुबै डोज खोप दिइएको थियो ।
यो परिक्षणमा चाहिँ खोपको प्रभावकारिता ९१.६ रहेको र कुनै गम्भीर नकारात्मक असर नरहेको जनाइयो । तर प्राथमिक तथ्यांक उपलव्ध नगराइएको भन्दै यो नतिजामा पनि अन्तराष्टिय विज्ञहरुले शंका व्यक्त गरे । पछिल्लो पटक गत अप्रिल ३ मा पुनः प्रकाशित नतिजामा चाहिँ स्पुटनिक भी, कोरोनाको युके मा देखिएको बी १ १ ७ भेरियन्ट र दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको १ ३५१ भेरियन्ट दुवै विरुद्ध उत्तिकै प्रभावकारी देखिएको बताइयो, यद्यपी यसमाथि पनि स्वतन्त्र पुष्टी भएको छैन भनि शंका व्यक्त गरिएको छ ।
जोखिम कति छ त ?
गत अप्रिलको शुरुआतमा युरोपियन युुिनयनका स्वास्थ संस्थाहरुले स्पुटनिक खोप लगाएको ४ जनाको मृत्यु भएको र अन्य ६ जनाको स्वास्थमा गम्भीर असर देखिएको दावी गरेका थिए । यो दावीलाइ रसियाका स्वास्थ विज्ञहरुलाइ ठाडै इन्कार गरे र भने त्यो खोपको प्रत्यक्ष कारणबाट हुन गएको भन्ने कुनै बस्तुगत आधार छैन । उनिहरुले स्विकार गरे कि खोपको कारणबाट केहीमा सामान्य स्वास्थ समस्या जस्तै, हल्का ज्वरो, टाउको दुख्ने, थकान आदि असर भने हुन सक्छ ।
स्पुटनिक खोपको प्रभावकारिता र सुरक्षाका बारेमा युरोपियन स्वास्थ संस्थाहरुले चासो राखेका राख्यै छन् र भिन्न भिन्न प्रतिकृया पनि दिइरहेका छन् । उनिहरुको भनाइ छ यदि स्पुटनिकलाइ युरोपमा अनुमति दिइने हो भने त्यसको संपूर्ण डाडासेट सहित उपलव्ध गराउनु पर्दछ । तर रसियन अधिकारीहरु भने यस्तो डाटासेट उपलव्ध गराउन हिचकिचाइरहेका छन् ।
स्पुटनिकलाइ भी कहाँ कहाँ अनुमति दिइएको छ ?
जर्मन संचार संस्था डी डब्लु को एक रिसर्च अनुसार स्पुटनिक भि लाइ भारत लगायत अन्य ६० देशहरु जस्तैः मेक्सीको, इरान, घाना, श्रीलंका, साइबेरिया, प्यालेस्टाइन क्षेत्र, बोस्निया, हर्जगोभिनामा स्विकृति दिइएको छ । युरोपियन संस्थाहरुले स्पुटनिकलाइ स्विकृती दिएका छैनन् र पनि इयु सदस्य राष्ट हंगेरी र स्लोभाकियामा यसलाइ आपतकालिन प्रयोेगका निम्ति स्विकृति दिइएको छ ।
हंगेरिले त आफ्ना नागरिकहरुलाइ यो खोप दइरहेको छ तर स्लोभाकियामा भने रसियाले पठाइदिएको २००००० डोजलाइ स्विकृती दिन सकिरहेको छैन । आजको परिदृष्य यस्तो छ कि स्पुटनिक भि कुन देशले स्विकृति दियो र कुन देशले दिएको छैन, वा कसले यो खोप लगाउन सुरु गर्यो भनि पत्ता लगाउन कठिन छ किनकी रसिया आफैले पनि अप्रिल १२ सम्मको तथ्यांक हेर्दा ८८ लाख ( ६ % ) रसियनलाइ मात्र यो खोपको पहिलो डोज दिएको छ ।
हाल केही देशहरुले स्पुटनिक भ्याक्सिनको अर्डर गरिसकेका छन् र परिक्षणको रुपमा धमाधम लगाइँदैछ पनि । तर उनिहरुले खोपलाइ पूर्ण अनुमति दिएको छैनन् । यस्तै ब्राजिलले भने ७ करोड ६ लाख डोज खोपको अर्डर गरिसकेको छ ।
होला त स्पुटनिक भी सर्बसुलभ ?
हालको परिवेश हेर्दा स्पुटनिक भी, यसको मूल्य र व्यवस्थापन सहजताका कारण विश्वमा अन्य कम्पनीका खोप भन्दा धेरै देशको पहँुचमा पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिल्यै यो खोप उपलव्ध गराउन ६० देशहरुले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरि अर्डर गरिसकेका छन् । भ्याक्सिनको विकासमा लगानी गरेको संस्था रसियन लगानी कोष हाल विभिन्न देशसंग संझौता बार्तामा व्यस्त छ । यति मात्र होइन सो संस्था खोप उत्पादन गर्न रसिया बाहिर अन्य देशमा जाने तरखरमा छ । यो खोप उत्पादन गर्न ५ भारतीय कम्पनीसंग संझौता भैसकेको छ र ति कम्पनीहरुले भारतमा ८५ करोड डोज भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।
भारतले यहि मे महिना देखि उमेर पुगेका हरेक नागरिकलाइ दिने खोप अभियानको नयाँ चरण सुरु गर्दैछ । यसले पछिल्ला दिनहरुमा छिमेकि देश भारतमा ताण्डव देखाइरहेको कोरोनालाइ परास्त गर्न ठूलो मद्धत मिल्नेछ । साथै छिमेकमा कोरोना मत्थर हुँदा नेपालमा पनि स्पुटनिक भी सिघ्रतिसिघ्र उपलव्ध गराउन सके कोरोना नियन्त्रण गर्ने सहज बातावरण बन्नेछ । खोपको यो सुलभता र संभावना हेर्दा यो आशा गर्न सकिन्छ कि अब नेपालीले पनि कोरोना कहरबाट मुक्त हुने दिन धेरै टाढा छैन । (अनलाइन स्वास्थ्य जर्नलहरुका लेख, टिप्पणी र समाचारमा आधारित )
प्रकाशित मिति: २१ बैशाख २०७८, मंगलवार १०:११
मुख्यमन्त्री पोखरेलले खोले लुम्विनी प्रदेशको यथार्थ
-शंकर पोखरेल लुम्विनीमा नेकपा(एमाले) प्रदेश सभा दल वहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका वखत मुख्यमन्त्रीमा दावी
गण्डकीकी पियारीको ‘प्यारो कथा’
१९ वैशाख, बागलुङ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने समयमा
होम आइसोलेसनमा बस्नु भएका कोरोना संक्रमितहरुलाई १६ सुझाव
होम आइसोलेसनमा बस्नु भएका कोरोना संक्रमितहरुलाई चिकित्सकहरूले दिनुभएको सुझाव यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । कोरोना
अनेरास्ववियूका नेता मिलन खत्रीः व्यक्ति एक सफलता अनेक
–किरण पौड्याल ‘मानिसमा काम गर्ने इच्छा हुनुपर्छ । काम फत्ते गर्न गाह्रो छैन’ । यो